အစ္စရေး4Socket Cable Reel ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး အစ္စရေး4Socket Cable Reel - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Cable elsရာဝတီ > အစ္စရေး Cable elsရာဝတီ > အစ္စရေး4Socket Cable Reel
Bohaoကေဘယ်လ်s ပံ့ပိုးပေး Isarel Cable Reel4ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုး Reel, ၁၅ မီတာ ၂၀ မီတာ ၂၅ မီတာ ၃၀ မီတာ၊ 50M နှင့် စိတ်တိုင်းကျ အရှည်၊ အစ္စရေး ပါဝါ ကြိုး, SI ဘေးကင်းရေး အတည်ပြုပြီး ထုတ်လုပ်သူ ထောက်ခံမှု နှင့် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာ ဆွဲချ အစ္စရေး Cable Reel, ကျေးဇူးပြု ဆက်သွယ်ရန် Bohaoကေဘယ်လ်s, တရုတ် ကျော်ကြား ကေဘယ်လ် reel ထုတ်လုပ်သူ.
၁။ အစ္စရေး၏နိဒါန်းမိတ်ဆက် ၄ Socket Cable Reel
၂။ အစ္စရေး ၄ Socket Cable Reel ၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
အစ္စရေးအမျိုးအစား H Plug
3. ထုတ်ကုန်များ၏အသွင်အပြင်နှင့်အသုံးပြုမှု4Socket Cable Reel
2) ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲမြင့်မားသောအလိုအလျောက်နှင့်ဉာဏ်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၌ run ။
၄။ အစ္စရေး Cable Reel ၄။ Outlet 16A socket မ်ားအားကလေးသူငယ်ကာကွယ်သည့် PVC သို့မဟုတ် Rubber cable ဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းတပ်ဆင်သည်။
၄။ အစ္စရေး၏ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၄ Socket Cable Reel
အစ္စရေး Cable Reel4Outlet Extension Cord Reel၊ 15M, 20M, 25M, 30M, 50M နှင့် Custom အလျားIsraelသရေလအမျိုး၏ Power Cord SI ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတည်ပြုခဲ့သည်အပူဖြတ်တောက်မှု, 4- လမ်း Socket-outlets, IP20 socket-outlet များနှင့်အတူ non-rewirable plug ။
၅။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးPသရေလအမျိုး၏4Socket Cable Reel
6. elသရေလအမျိုး၏သင်္ဘောတင်ပို့ခြင်း၊ အမှုဆောင်ခြင်း4Socket Cable Reel
7 ။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
A: (၁) အမှာစာမအတည်ပြုမီ၊ PVC / Rubber ပစ္စည်း၏နမူနာနှင့်အရောင်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တူညီသောနမူနာဖြင့်စစ်ဆေးပါမည်။
(၄) ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီသုံးစွဲသူများသည်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်အတွက် QC တစ်ခုသို့မဟုတ်တတိယပါတီသို့ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
Q2: OEM, OBM or ODM ကိုလက်ခံပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့ OEM၊ OBM or ODM ကိုလက်ခံပြီးသင်၏အသေးစိတ်တောင်းဆိုချက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။
A: နမူနာ ၇ ရက်လောက်ပြင်ဆင်ထားရတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့သည့်နေ့ရက်သည်အမှာစာနောက်မှ ၂၀-၂၅ ရက်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ သင်လိုအပ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်ရေးဌာနနှင့်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
hot Tags:: အစ္စရေး4Socket Cable Reel, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း